Họtelu ndi di na Abeokuta, Ogun - Tinye akwụkwọ ugbu a, Kwuọ ụgwọ ma emesi a!
Huta odi iche ndi di na omenala na njem nleta dika I na a bia nleta na Abeokuta na Nigeria, maka ubochi ezumike ma ọ bụ ezumike nke gị na ndi ezinụlọ gị, ndị enyi gi na ndị i hụrụ n'anya.
Abeokuta bu obodo nke a maara di ka obodo kasị ukwuu na isi obodo nke Ogun State na mba ndịda ọdịda anyanwụ nke Nigeria. Ọ bu nke di n'ebe ọwụwa anyanwụ nke egbere mmiri nke Osimiri Ogun, di nso na ìgwè nkume n'ọhịa nwere oke osisi na ya.
Ebe Njem Nleta ndi di nma
Ọzọkwa, mefue obere ego ma nweta ihe ụtọ di ukwuu dị ka ị na ano onunu ezumike gị na Abeokuta. Nwe mmetuta na ihe nketa na omenala nke Afrika dị ka ị na aga njem nleta na ebe ogige njem nleta nke di isi obodo Abeokuta.
Otu n'ime ebe njem nleta di mma ga na eme ka ị na-abịa n'obodo a mgbe ọ bụla enwere ezumike bụ Okwute Olumo (Olumo Rock) amama nke bụ ebe njem nleta amama, na ọtụtụ ndị obia njem nleta na esi n'akụkụ dị iche iche nke Nigeria na mba ndị ọzọ na abia maka I nwe anuri na ogige ya di ocha na gburugburu ebe obibi ya mara mma nke ukwuu, nakwa ile ihe Ọdịdị okike ya dị ịtụnanya.
E wezụga iyi (Osimiri), ulo ebe mgbakọ na otutu ihe nkà na uzu nke di na ala nke nkume a, obodo a nwere otutu ihe ndi ọzọ na-akpali mmasi, ndi dị ka ogige Panseke (Panseke Gardens), nke ogologo osisi Dongoyaro gbara gburugburu ya nke oma. Ogige a bụ ezigbo ebe maka ezumike na ebe ememe ncheta nke ụbọchị ọmụmụ n’kwa ememe ndị ọzọ di nta. N'oge ubochi ememe, ọ na-abụkarị ebe nhọọrọ maka mgbakọ nnọkọ ndi otu dị iche iche na-elekọta mmadụ. Igwe mbuli elu dị maka ụmụaka, ndị agadi na ndị ọzọ na -eme njem nleta nwere ihe egwu di elu.
N'elu elu nke nkume a, ị ga enweta anuri dika I ga elezu Abeokuta anya na ozuzu oke na ihe akụkọ mere mgbe ochie na ihe okpu ndị ọzọ di iche iche nke gbasasịri n'akụkụ ya dị iche iche. N'elu elu nke oké nkume, nwere otu oke osisi orji toro ogologo nke ukwu bu nke ekwere na ogbalaa afọ rue ihe ruru nari abụọ. "Osisi a anaghia akpọnwụ akpọnwụ ma ọ bu wụsịa akwukwo ya site na afọ rụe na afọ.
O na adi ndu site na ubochi rue na ubochi, na okochi ma o bu na udu mmiri, otu n’ime ndi nlekota nke ogige a siri. Nkume a bu ebe njem nleta, ebe ndi mmadu na abia maka inara ikuku.
Ebe njem nleta ndi ozo na obodo a gunyere, ogige ebe omumu ihe a na akpo (Management Traning Centre) na okwu beeke, Ogere Man-made, Ahia Adire, Omenala Itoko Abeokuta, Ogige ndi nwere nkwaru nke Abeokuta, Birikisu Sungbo Shrine ogige ihe omenala na Okpukperechi nke njem nlere anya, Oke osimiri njem nleta nke Obute-Oni, Obi okputaraokpu nke onye eze (Ancient Palace) nke omenala na okpukpurechi nke Alake nke obodo Egbaland.
Họtelu Ndi Di na Abeokuta
I ga enwe ezi onunu na nlekota di nma ma ime njem nleta ga na họtelu ndi di na Abeokuta, Họtelu ndi di ka Equity Resort Họtelu, Dusmar Presidential Họtelu, Daktad Suites & Event Center, Richton Họtelu & Suites, Micron Suites International na otutu ndi ozo. Tinye akwukwo maka Họtelu na Jumia Travel site na igwe ozi komputa maka I nweta onu ahia di nma maka Họtelu ndi di na Abeokuta, di ka I na enweta nlekota di nma na onu ego egburu na ntu.
Usoro Ime Njem Na Abeokuta
Abeokuta na Lagos nwere Ihe njikota di nso nke okporo igwe na nke okporo uzo. O nwekwara ihe njikota rue Ilaro, Shagamu, Iseyin, na Ketou. O di nso nke ukwuu rue na ufodu obodo ndi amama n’ime steeti bu ndi di ka, Agbara, Aiytetoro, Aro, Ibara Orile, Idiya, Ijebu, Iwo, Ole. I nwekwara ike ga otutu ebe ndi ozo site na iji ugboala tagzi, Bọs ma o bu kawnu ugboala nke akwo-ugwo ebunye na Abeokuta.